Mbido EGO AFRICAN FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Nigeria Alex Iwobi nwa akwukwo n'akwukwo nke oma
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; 'Nnukwu 17'. Ụdị anyị nke Alex Iwobi's Biography Facts, gụnyere akụkọ nwata ya, na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Nigerian Football Star gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama ama, ndụ ezinụlọ na ọtụtụ OFF na ON-Pitch ihe ndị a na-amaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya ma ole na ole tụlee Alex Iwobi Biography Story, nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a, na-enweghị oge ọzọ, ka anyị malite.
Alex Iwobi Storymụaka Akụkọ - Oge Mbido:
Alexander Chuka "Alex" Iwobi a mụrụ na 3rd ụbọchị nke May 1996 na Lagos, Nigeria site na Mr na Mrs Chuba Iwobi.
Mgbe ọ dị afọ 2, ezinụlọ ya kwagara Turkey iji sonyere nne nne ya bụ onye ọkpụkpọ Nigeria mbụ Austin Jay Jay Okocha.
N'oge ahụ, Okocha na-egwu egwu na Fenabache. Na 2002, mgbe ọ dị afọ 4, ezinụlọ ya kpọgara Iwobi na London mgbe nwanne nna ya kwagara ebe ahụ ka ya na Bolton Wanderers gwuo egwu. A zụlitere ya nke ọma na ụlọ dị n'ebe ọwụwa anyanwụ London nke dị nso na Bolton Wanderers.
N'England, ọ malitere soro ndị enyi ya na-egwu egwuregwu na nso nso site na nso nso ya.
Alex Iwobi Biography Eziokwu - Mmalite Ọrụ:
Iwobi binyere aka na Arsenal mgbe ọ ka nọ na ụlọ akwụkwọ praịmarị mgbe ọ dị afọ asatọ. Austin metụtara mbinye aka ya na klọb ahụ Jay-Jay Okocha.
Ọ malitere ndụ ebe ọ na-arụ ọrụ dị iche n'etiti ịkụ bọl na ịmụ akwụkwọ. Oge ntorobịa ya na Arsenal bịara n'oge klọb ahụ nọ na elu nke bọọlụ Bekee.
Alex Iwobi bụ nwa obi ụtọ na Arsenal ruo mgbe ọdachi ahụ mere. [Gụọ ebe a].
Alex Iwobi Biography - Mgbe Ihe Na-aga nke Ọma:
Ihe anaghị aga nke ọma na mmalite mmalite ya ka ọ nọ nso ịhapụ klọb ahụ mgbe ọ dị afọ iri na ụma. Mama ya enweghị obi ụtọ banyere ọrụ nwa ya nwoke ka ha zigara ya akwụkwọ ozi ịhapụ ya. Ihe a wutere ezinụlọ ahụ.
Alex Iwobi na-agụ akwụkwọ ozi si na Arsenal na-eyi egwu ịhapụ nwa ya nwoke
Dị ka Iwobi si kwuo, “Ebe ọ bụ na enweghị m nnukwu, ọsọsọ ma ọ bụ sie ike dị ka onye ọ bụla ọzọ, enwere akara ajụjụ na m na anaghị m etinye onwe m n'egwuregwu ahụ dịka m kwesịrị. Ọ na-ewe m iwe n'ihi na m na-agbakwa mgba n'ụlọ akwụkwọ, m na-eche mgbe niile .. 'Gịnị ka m ga - eme iji meziwanye?'
Mụ na papa m ma ọ bụ ndị enyi m ga-anọkọ. Mama m mere m ka m mee ịgba ọsọ n'ime ụlọ. Nwanne m nwanyị gbalịrị ịgba bọl.
Ọbụna mama m kpọrọ nwanne ya nwoke Okocha na enyi ya Kanu ka ha bịa soro m nwee ọzụzụ ọzụzụ onwe onye. Onye ọ bụla nọ na-agbalị inyere m aka. ”
Dị ka ọ dị, ha nile nwere obi ụtọ banyere otú Iwobi si gbanwee ihe. Ekem ke ini enye ekedide eyenọwọn̄ ke otu mbre, enye ama ọsọn̄ọ ada ke ukpọk onyụn̄ ekpep ndikpepke mme mfịna. Nke a bụ ihe Kanu na Okocha kụziiri ya.
Arsenal nwere obi ụtọ na ya. Iwobi jiri ikpo okwu ahụ gosipụta onwe ya ma duru ndị ntorobịa ya aka inweta trophies.
Ọzọkwa, ọ na-anwale ụbọchị ọ bụla iji wuo ya na ngwaahịa ndị ọzọ. "Nke ahụ bụ ihe nnukwu egwuregwu na-enweta maka, ihe mgbaru ọsọ ma ọ bụ ime ihe mgbaru ọsọ," Iwobi kwuru.
Ọ bụ ihe mgbaru ọsọ o meriri Basel nke mere ka obi sie ya ike na ndị agha Arsenal n'oge ikpeazụ. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Matteo Guendouzi Child Story Plus Akwụsịghị Echiche Eziokwu
Ndụ Alex Iwobi:
Alex Iwobi sitere na ọgaranya ezinụlọ n'ekele maka ịrụsi ọrụ ike ha na n'ezie, njikọ ezinụlọ Austin Jay Jay Okocha, bụ onye mba Nigeria.
Banyere Alex Iwobi Papa:
Nna Alex Iwobi, Chuba Iwobi bụ ndị na-agba ọsọ, bụ onye hapụrụ ọrụ ịgba ụgwọ amateur na-akwụ ụgwọ iji mụọ iwu iji lekọta ezinụlọ ya ma kwenye na ọdịnihu ga-adịrị ha nso.
Taa, Iwobi na-etinye aha ezinụlọ na teknụzụ TV gafee ụwa na nnukwu egwuregwu ya maka Arsenal.
Nna Iwobi, Barrister Chuba bụ ihe dị mkpa maka nwa ya nwoke maara gburugburu na ọdịbendị ndị Nigeria.
Alex Iwobi na Nna, Barrister Chuba Iwobi.
Banyere nne Alex Iwobi:
Nne ya bukwa onye Naijiria site na ya. Ọ bụ nwanne Austin Jay Jay Okocha. Ịhụnanya ya maka Alex kemgbe ọ bụ nwata dị ka ihe ọ bụla ọzọ n'ụwa.
N’ezie, obi nne ya anọwo n’ebe ọ nọ malite n’ụbọchị mbụ. A na-ekpughe nke a na foto dị n'okpuru.
Nwa okorobịa bụ Alex Iwobi na mama m.
Banyere Nwanna nwanyị Alex Iwobi:
Alex Iwobi dị nso nwanne ya nwaanyị, bụ Marie. N'okpuru ebe a bụ ihe osise nke ya, papa ya na nwanne nwanyị mara mma Marie.
Marie Iwobi, nwanne ya nwoke, Alex na Nna.
Ọ gara mgbe ọ gara leta ya na mahadum, na-adọta ihe mkpuchi ka ọ ghara ịdọrọ uche ọ bụla pụrụ iche.
"Achọrọ m iso nwanne m nwanyị na-enwe obi ụtọ," ọ na-ekwu. "Anyị nọ nso, anyị na-anọkọ mgbe niile, na-achị ọchị. Ana m agbalịsi ike ilekọta ya. "
Banyere Alex Iwobi Uncle:
Alex Iwobi bụ Jay-Jay Okocha's nwa nwanne ya, nke a na-esikwa n'ike mmụọ nsọ nke ndị na-agba bọl na Nigeria, bụ ndị nyekwara ya aka inweta ọkwá ya na ìgwè ndị Naijiria.
O meela nwanne nne ya Jay-Jay [Okocha] ile anya dị ka onye ndụmọdụ. Agbanyeghị, ọ ka chọrọ ka akara aka ya dị ka ndị egwuregwu ndị ọzọ.
Na okwu 'Enwere m mmasị ịbụ nwa nwanne Jay-Jay ma achọrọ m ịmepụta onwe m, Achọrọ m ka ndị mmadụ mara m dịka Alex Iwobi ma ọ bụghị Alex Iwobi, nwa nwanne Jay-Jay', nke o doro anya na egosiputa otutu ochicho.
Dị ka ezigbo enyi nke Iwobi si kwuo; “Ihe m na-ekwu bụ na Jay-Jay abụrụla onye ndụmọdụ ya, ọ gbara ya ume, gwa ya ebe ọ ga-aga na etu esi eme onwe ya.
N'ime atụmatụ nke ihe, ọ ka chọrọ inwe njirimara nke ya dịka egwuregwu ọ bụla ọzọ, yabụ Alex Iwobi bụ Alex Iwobi.
Obi dị m ụtọ na ọ malitere ịkọwa onwe ya wee bụrụ Alex Iwobi. Site n'ịrụsi ọrụ ike na nraranye, ọ ga - eme nke ọma naanị na nke ahụ bụ ekpere nke ndị nne na nna ọ bụla. ”
Alex Iwobi Clarisse Juliette Akụkọ ịhụnanya:
Alex Iwobi anọwo na mmekọrịta 4 na enyi nwanyị Clarisse Juliette bụ onye nlereanya UK.
Nwanyị Alex Iwobi- Clarisse Juliette.
Ihe nlereanya nke UK na-emekarị banyere Alex ma na-ekesa foto ya mgbe niile dị ka ihe ịrịba ama nke igosi otú ọ hụrụ ya n'anya.
Clarisse Juliette gosipụtara enyi ya nwoke na mgbasa ozi mgbasa ozi.
Agbanyeghị, ihe agaghị nke ọma mgbe ọ na-eme emume ncheta afọ 21st ya. Ha gbajiri !!
Di na nwunye mbụ ahụ agbanyela foto nke ibe ha na ibe ha. Dị ka ha na-ede, ha anaghịzi eso ibe ha na Instagram.
Ndị na-ahụ bọs hụrụ nke a mgbe Alex mere ememe ụbọchị ọmụmụ 21st ya ma ghara inwe mkpuchi ụbọchị ọmụmụ site na Juliet. Oma amaghi kwa ya n'ememe ememe ncheta nke emere n'ulo nna nne Alex na London.
Ọbụna maka oge mgbe Clarisse na-eme ncheta ọmụmụ ya na-abụkarị na May 2nd, Alex maara na ọ na-enye mkpu mgbe niile. Oge a, ọ dịghị ihe mere.
Mgbe ụbọchị ọmụmụ ya gasịrị, Juliette kesara vidio na Snapchat ya nke na-ejide ụfọdụ dollar na nkọwa ahụ 'ị gaghị enwetaghachi azụ gị'.
Nwa nwanyi enyi Iwobi na-akwado nkwenye na nwoke ya.
Ọ kpọrọ Alex Iwobi 'onye aghụghọ' n'ihi nkwenye ya ekwuru. Ha enweela nnukwu ịhụnanya ha nwere ugbu a.
Alex Iwobi na Clarisse Juliette- Otu Oge Ndị hụrụ n'anya.
Alex Iwobi Untold Biography Eziokwu - Na-ekwu Nkọwa na Nghọta Igbo:
Iwobi anaghị asụ asụsụ Igbo Igbo ma ghọta asụsụ ahụ. Ọ na-aghọta asụsụ Yoruba Nigeria. Ọ na-ekwu okwu ọma Pidgin English ma na-eji ya agwa onye enyi ya nọ na Nigeria okwu.
Dị ka ndị mụrụ ya si kwuo, 'Anyị chere na ọ bụ ọdịda anyị n'akụkụ n'ihi na anyị nwere ike ime ntakịrị ihe iji mee ka ọ ghọta asụsụ Igbo.
Otutu ndi Naijiria nwere obi uto na Iwobi weputara asusu uwa dum nke bu 'Pidgin Bekee' ọ gbalịsikwara ike ịgwa ndị otu ya okwu ya.
N'ime ndị otu Naịjirịa, ị nwere ndị Igbo na ndị Yoruba mana asụsụ ụwa niile bụ Pidgin. Nzute izizi ya na Pidgin bụ mgbe akpọrọ ya ka ọ sonyere ndị otu na-anọghị n'okpuru Nigeria.
Dị ka nna ya si kwuo, “Ọ na-akawanye mma ugbu a ma ọ na-abịa n’otu ọkwa ebe ọ na-aghọta okwu niile nke asụsụ Pidgin mana mgbe ahụ ọ na-agba mbọ itinye echiche ya n’okwu asụsụ bekee.
Ya mere, o nwere nghọta zuru oke banyere Pidgin yana oge ọ ga-abịa nwayọ n'ogige, ejiri m n'aka na ọ ga-aka mma, " Nna Iwobi gwara mgbaru ọsọ.
Alex Iwobi Biography Eziokwu - Lovehụnanya Maka Nri Naịjirịa:
O nwere ike ịbụ na o toro na United Kingdom dị ka nwa amaala nke ndị obodo obodo, ma Iwobi hụrụ ihe oriri nke Naijiria, nke kachasị mma Eba na Okra ofe na azu azu. Okwu nna ya…
Ihe oriri na-amasịkarị Alex Iwobi- Okra, Eba na Stew azụ
“Ọ ga-egbu m maka nke a, mana nri kachasị amasị Alex bụ Eba (a na-erikarị mkpụrụ ntụ) na ofe okra nke mama ya mere. Daysbọchị ndị a, ọ na-eri ụdị nri Naijiria niile. ”
Nke mbụ na-abịa Nigeria:
N'ịbụ onye ji ọtụtụ ndụ ya na England, ihe ndị Niger na-eme na-eju ya anya mgbe mbụ ọ gara mba ahụ iji gosi Super Eagles.
“Onye ọ bụla nwere ekele maka gị. Ọ dị gị ka eze! ” ọ na-ekwu. “Mgbe m rutere n’ọdụ ụgbọelu, echere m na m ga-enweta ntị m, ma onye ọ bụla dị ka‘ Iwobi! Iwobi! ' Oh gosh. Ndewonu! Amaghị m ihe m ga-atụ anya ya. Ọ bụ naanị ara.
Ekem mma ntọn̄ọ ndisan̄a ye enye Kelechi Iheanacho onye bu oke nwa Naija. Ebe ọ bụla anyị gara, a na-eburu anyị. N'ihi na anaghị m eme omenala ndị Naịjirịa dịka ha siri dị, ọ na-enyere m aka na ya. Enweghị m ike ịsụ asụsụ ahụ nke ọma.
Ha na-enyere m aka na ndị Fans. Fans dị nnọọ iche n’ebe ahụ. Ha anaghị ajụ m maka mpempe akwụkwọ, naanị ihe ha na-arịọ bụ akpụkpọ ụkwụ, uwe na ego.
Ọ dị mkpa iji mara nke ahụ Kelechi Ihenacho bụ ezigbo enyi Alex Iwobi. Ya na ya nwekwara ezigbo mmekọrịta Ahmed Musa na Mikel Obi.
Iwobi gara n'ihu….
“N’oge izizi m malitere igwu egwu n’ámá egwuregwu na-ejide 30,000 ma e nwee 60,000 - Aghọtaghị m otú. Ndị mmadụ na-eguzo na ọkụ mmiri, na akara akara.
M nọ na-eche, sị 'Gịnị? Nke a adịghịdị mma! ' Mana ndị mmadụ nọ ebe ahụ ga-eme ihe ọ bụla iji lelee egwuregwu ahụ. Oge ụfọdụ n’egwuregwu Premier League ndị Fans na-adị jụụ mana na Naịjirịa, ị na-anụ opi, ihe niile. Ọnọdụ dị iche na England. ”
Obi abụọ adịghị ya na ọhụụ mba ọzọ bụ onye ọzọ na-emeghe anya na ọrụ a. Iwobi enweghi ike ichere ichota.
Nwanne Alex Iwobi:
Alex Iwobi na-ele anya na-agbaso nzọụkwụ nke nwanne nna ya na onye isi Nigeria bụ Austin Jay-Jay Okocha.
"Ọ bụ akụkọ mgbe ochie n'Africa football ma amaara m na m ga-arụsi ọrụ ike ka ndị mmadụ wee nwee ike ikwu okwu ọma banyere m kwa," Iwobi kwuru.
Inwe ya dika nwanne nna ya nyere aka maka mkpalite mmụọ mana enweteghị m ọkwa m site na ịbụ nwa nwanne - enwetara m ụzọ m. Ihe mgbaru ọsọ m bụ inweta ọtụtụ oku na-eme ka m nwee ike, nweta ọtụtụ egwuregwu dịka m nwere ike ma merie ọtụtụ trophies na Nigeria. "
Obi abụọ adịghị ya, Okocha ka bụ otu n'ime ndị na-enwe mmetụta dị ukwuu na ọrụ Iwobi.
Dị ka Iwobi si kwuo, “Anyị na-ekwu kwa izu ọ bụla. Ọ na-adụ m ọdụ, ọ bụghị naanị na olulu kamakwa na ya.
Football bụ ọrụ dị mkpụmkpụ n'ihi ya, ọ na-agwa m mgbe niile ka m nọgide na-ebi ndụ. Ọ na-adụ m ọdụ ka m nweta azụmahịa na inwe ihe onwunwe na Nigeria. Ọ na-agba mbọ mgbe niile ime ka m nwee isi ma nyere m aka ịhazi maka ọdịnihu mgbe agba bọọlụ. ”
N'ịgbaso nzọụkwụ nke Okocha, Iwobi ahọrọla igwu egwu maka Nigeria karịa England.
Okwesiri ikwuputa na Iwobi nochitere anya England n'okpuru 16, 17 na 18 ozo. O kpebiri ịhapụ ndị otu ahụ ma jeere nna nna ya ozi.